A wiricheya vhiri kufamba mudziyo unogara mushandisi uye unokwanisa kuve nhare. Chigadzirwa chinofambiswa chero nemaoko (nekushandura mavhiri neruoko) kana kuburikidza akasiyana masisitimu akangoita semagetsi emagetsi. Mawiricheya anoshandiswa nevanhu avo kufamba kwavo kwakaoma kana kusingagone nekuda kwechirwere (zvemuviri kana zvepanyama), kuipa, kana kuremara.
A wiricheya inobatsira vanhu kuti vawedzere kufamba uye kuzvimiririra. Kune akawanda marudzi akasiyana e Mawiricheya ayo anoshandiswa pazvikonzero zvakasiyana siyana. Izvo zvakakosha kuti unzwisise kukwana uye kushanda kwakachengeteka kwechero chii wiricheya iwe unosarudza.
Siti chigaro saizi (upamhi uye kudzika), chigaro-kusvika-pasi kukwirira, zvigaro zvetsoka / gumbo zororo, kumberi kwecaster outrigger, zvigadzikiso zvekumashure, zvinodzora, uye zvimwe zvinhu zvakawanda zvinogona kugadziridzwa pane, kana kuwedzerwa kune, akawanda ekutanga mamodheru, nepo mamwe vashandisi, kazhinji avo vane zvidikanwi zvakakosha, vanogona kuve nazvo Mawiricheya tsika-akavakwa.
Manual Wiricheya Nhungamiro Yemashoko
A Manual Wiricheya imwe inofambiswa nemushandisi. Inowanzoitwa nekusundira pamazariro akapoterera mavhiri. Izvi wiricheya ine zvakare inobata kumusana kuti igone kusundirwa nemumwe munhu. A Manual Wiricheya iri nyore kuchengetedza, iri lightweight, uye ndiyo isingadhuri kutenga.
Electric Mawiricheya inofambiswa nemota uye bhatiri. Ivo vakaomesesa kwazvo. Ivo vanovhiyiwa nerufaro tsvimbo kana kusunda mabhatani. Mamwe magetsi Mawiricheya shandisa tekinoroji yepamberi uye unogona kukwira masitepisi, kufamba pamusoro pevhu uye kunyange kusimudza kuti upe mukana kune masherufu akakwirira. Magetsi Mawiricheya vanoda mafuremu akasimba ekutsigira mota nebhatiri saka zvinorema uye zvakare zvinodhura. Ivhareji mutengo wemagetsi wiricheya iri $ 7000 asi inogona kuwira chero kubva $ 3000 kusvika $ 30,000.
Seizvo zita rinoratidzira, mitambo Mawiricheya zvakagadzirirwa kutamba mitambo. Iwo akareruka akareruka asi akatsiga kwazvo. Ivo anowanzo shandiswa tenesi, wiricheya basketball, uye marathons
Simba chigaro Nhabvu uye Simba Nhabvu Mawiricheya
Mutambo mutsva wakagadzirirwa vashandisi vechigaro chemagetsi vanonzi simba cheya nhabvu kana nhabvu yemagetsi. Ndiyo chete mutambo wemakwikwi wevashandisi vechairchair.
Kumira wiricheya ndeimwe inotsigira mushandisi mune chinzvimbo chakamira. Iwo anogona kushandiswa seese ari maviri wiricheya uye furemu yakamira, ichibvumira mushandisi kugara kana kumira mu wiricheya. Vanozoenda kubva vakagara vakamira ne hydraulic pump kana magetsi-powered assist.
Chiremba Mawiricheya ese ari maviri mune echinyorwa uye emagetsi fomu. Iwo angori mashoma madiki ezasi shanduro dzevakuru vakuru Mawiricheya. Izvi zvinowanzo gadziridzwa kuitira kuti vagone kukura nemwana uye nekuwedzera kuti vagone kuwedzera huremu uye huwandu sezvo mwana achikura.
kana Nzvimbo Dzese Mawiricheya bvumira vashandisi kupinda mumvura uye vape zvirinani kufamba mujecha. Kune akawanda emhando dzakasiyana dziripo. Munyika zhinji muEurope uko iyo Zvinowanikwa Tourism yakamisikidzwa zvakanaka, mahombekombe mazhinji ari wiricheya Zvinowanikwa uye nekupa iyi mhando ye Mawiricheya kune vatengi mahara.
3 mavhiri Mawiricheya haisi pfungwa nyowani uye yakagara ichishandiswa mukugadzirwa kwemijaho Mawiricheya, Tennis Mawiricheya, uye mimwe mitambo pamwe nezuva nezuva chinangwa chose Mawiricheya. Izvi Mawiricheya akatsiga uye anofambika pamusoro penzvimbo dzakaomarara pane mana-mavhiri wiricheya.
Kufambira mberi kwazvino tekinoroji kuri kuwedzera zvishoma nezvishoma wiricheya uye EPW tekinoroji. Vamwe Mawiricheya, senge iBOT, inosanganisira gyroscopic tekinoroji uye kumwe kufambira mberi, zvichigonesa sachigaro kuenzanisa uye kumhanya pamaviri chete emavhiri aro mana pane dzimwe nzvimbo, nokudaro zvichisimudzira mushandisi kureba rakaenzana nemunhu akamira.
Vanogona zvakare kuisa masitepisi-kukwira uye mana-vhiri-dhiraidhi mota ine mota rubatsiro rwemaoko-anemasimba macheya ari kuramba achiwanika uye epamberi.
Ehe, pane chinhu chakadai Mawiricheya imbwa. Ivo vakasikwa kuti vabatsire vakaremara uye imbwa dzakakuvara dzinoitazve yavo kufamba. Nguva zhinji, dambudziko nderekubva muchiuno kana a musana kuipa iyo inosiya imbwa isina simba pamusoro pemakumbo ake ekumashure.
Imbwa wiricheya inokwana pamakumbo ekumashure uye inotenderera nepasi uye imbwa inofambira mberi nemakumbo ayo epamberi. Izvi zvinobatsira imbwa kuwanazve kufamba uye enda kunorarama hupenyu hunofadza uye hune hutano.
Chero nguva iwe paunenge uri mumusika we wiricheya, zvisinei uine mhando yauri kutsvaga, ipfungwa yakanaka kuita zvimwe zvekuenzanisa kutenga.
siyana Mawiricheya unouya nemhando dzakasiyana uye nemitengo yakasiyana zvakare. Iwe uchazoda kuve nechokwadi kuti iwe unowana yakanaka dhiri remari yako uye unozoguma neakanakisa wiricheya yemunhu achave kushandisa izvozvo.
Unogona kutenga Mawiricheya nhasi mune festive mavara uye zvigaro zvigaro. Uyezve unogona kuenderera mberi gadzirisa ivo mushure mekutenga kuita iyo wiricheya zvakasarudzika yemushandisi pachayo.
ichi Manual Wiricheya gwaro reruzivo rinofanira kukubatsira iwe kutsvaga chaicho Manual Wiricheya nekuda kwezvaunoda iwe pachako.
Kana iwe uine kugona Push yako wiricheya, iwe unozoda izvo zvinozivikanwa se Manual Wiricheya. Izvi Mawiricheya inosundwa nemushandisi nekusunda marimu pamashure mavhiri.
Mutengo we Manual Wiricheya inogona kusiyana kubva pa $ 475 - $ 7,600, uku kusiyana kwemutengo kunoenderana nekuti chii icho wiricheya inogadzirwa kubva, uye kana ichivakwa kuyera (bespoke dhizaini) dhizaini, kana "yakajairika dhizaini.
Kune zvakawanda zvigadzirwa a wiricheya inogona kugadzirwa kubva pane anosanganisira:
Kune marudzi maviri e wiricheya izvo zvekutarisa. Aya ndiwo Rigid Chimiro wiricheya uye Folding furemu wiricheya.
Rigid Chimiro Mawiricheya
Kazhinji, chimiro chakaomarara wiricheya ichave neyakaomeswa furemu panogara munhu. Musana wechigaro unokwanisa kupeta pasi, uye mavhiri acho anokurumidza kuburitsa mashandiro ekuti zvive nyore kutakura uye chengetedzo yeiyo wiricheya.
Yakawanda yakaoma furemu Mawiricheya zvinogadzirwa kubva kune aruminiyamu kana titanium, asi kune vamwe nyanzvi Mawiricheya yakagadzirwa kubva kabhoni fiber. Yakareruka yakaoma yakaoma furemu wiricheya inogona kuyera zvishoma se10lbs isina mavhiri. Sezvo chigaro chiri chakareruka, zvichave nyore kupusha, nekudaro kuisa kusanyanya kushushikana pamapendekete ako epafudzi.
Seyakaomarara furemu Mawiricheya vane zvikamu zvishoma zvinofamba, ivo vanowanzo simba kudarika kupeta Mawiricheya uye kugara kwenguva refu.
Folding furemu Mawiricheya
Furemu yekupeta wiricheya ndiwo wiricheya iyo furemu inodonha padivi nekushandiswa kweX mashandiro mufuremu. Iyi nzira inokiyiwa, uye iyo wiricheya folds pakaburitswa mairi maviri ekukiya levers pachigaro.
Nokuti the kupeta wiricheya ine X michina, inokiya levers uye yekumisazve struts, inowanzo kuve inorema kupfuura kuomarara furemu wiricheya. Kupeta Mawiricheya zvakare une tsoka dzinofamba dzinobvumira chigaro kudonha. Macheya ekutanga ekupeta akagadzirwa nesimbi, asi mazuva ano agadzirwa kubva kualuminium kana titanium.
Sezvo paine zvimwe zvinofamba zvikamu muchigaro chinopetwa, uye majoini anotakurika, chigaro hachina kusimba sedanda rakaomarara wiricheya. Izvi zvinozoreva kuti kukwirisa kwepamusoro kunodiwa kuchengetedza iyo wiricheya mune zvakanaka.
Vakaomarara Kana Kupeta Mawiricheya
NaDr. Gene Emmer
Wakamboona here kuti hauna kumboona a remara mutambi achikwikwidza mu kupeta wiricheya? Icho chikonzero ndechekuwedzera kuita kweyakaomarara Mawiricheya. Vatambi vese vanotsvaga kukwidziridza mashandiro. Asi kuita hakuna kukosha chete kumitambo Mawiricheya, zvakakosha kune vanoshanda vezuva nezuva vashandisi zvakare. Tsime rakagadzirwa rakaomarara wiricheya inova chikamu chemuviri we remara mushandisi achibvumidza kuwana nyore uye nerusununguko rwekufamba. Ndeapi maficha eyakaomarara wiricheya izvo zvinopa kuita kwakakwirira?
Kuderedza Kugadziriswa uye Kurema: Macheya ekupeta ane zvakawanda zvezvikamu zvinofambiswa zvinotambudzwa. Izvi zvikamu zvinofanirwa kugara zvichigadziriswa kana kutsiviwa kuti chigaro chiwirirane. Nekuda kwesimba iri, mukobvu wakakomberedzwa nealuminium inodikanwa uye nekudaro iyo Mawiricheya kazhinji zvinorema. Rigid Mawiricheya ine zvikamu zvishoma zvinofambiswa uye zvishoma zvinhu zvinokanganisa. Rigid Mawiricheya kazhinji zvinogara zvakasimba uye zera riri nani pane kupeta Mawiricheya.
Akawanda esimba kubva kusunda pamavhiri akarasika munzvimbo dzinochinja dze kupeta wiricheya. Sezvo yakaoma wiricheya ine zvikamu zvishoma zvinofambiswa, mazhinji esimba kubva kusunda kwemavhiri anodudzirwa kuenda kumberi kufamba. Muchidimbu, vakaoma wiricheya zvinogona kuve nyore Push kupfuura a kupeta wiricheya.
Nekuda kwekuda kupeta, iyo kupeta wiricheya dhizaini inogona kunge isina kugadzirirwa kuita. Semuenzaniso, ma casters e kupeta wiricheya anowanzoiswa zvakanaka kuseri kwetsoka-zororo, kuitira kubvumira iyo wiricheya kuvhara zvakanaka. Iyi dhizaini inoisa huremu hwakawanda pane ma casters. Neyakaomarara wiricheya, iyo nzvimbo pakati petsoka uye makanda kazhinji kazhinji ipfupi; kuisa zvimwe zvehuremu pamashure mavhiri. Kurema kushoma pane ma casters kunoita kuomarara wiricheya nyore kutendeuka.
Nekuti yakaoma Mawiricheya akareruka uye anodzoreka kupfuura kupeta Mawiricheya ivo, vanoita zvirinani, ndiko kuti, zviri nyore kuti mushandisi apinde mukati. Asi ichi hachisi chinhu chinobatsira vatambi chete. Fungidzira a wiricheya mushandisi kukwira a wiricheya ramp pasina rubatsiro. Izvi zvinogona kuve zvakanyanya kuomesa mune inorema yekupeta cheya, pane mune inogadziriswa, ultra-mwenje, iyo inogona kuve yakareruka ne10kg kana kupfuura.
Mukupfupisa, nekuda kwekurema, dhizaini, uye zvishoma zvinofamba zvikamu, mashandiro eyakaomarara wiricheya kazhinji zviri nani kupfuura a kupeta wiricheya. Uyu mutsauko unogona kutonyanya kuonekera seiyo Mawiricheya zera.
Kuita kune imwe chete yezvakanaka zveyakaomarara wiricheya kudarika kupeta Mawiricheya. Pazasi pane yakasarudzika runyorwa rwezvakanaka zveyakaomarara Mawiricheya pamusoro pekupeta macheya. Unogona kufunga nezvevamwe here?
Nani Muviri Wakakodzera (Dhizaini): Iyo yekutanga dhizaini yakaoma wiricheya kukwana muviri wemushandisi. Iyo yekutanga dhizaini ye kupeta wiricheya ndiko kupeta. Kupeta Mawiricheya kazhinji ari boxy, nepo achiomarara Mawiricheya kuenderana nechimiro chemuviri. Semuenzaniso, nechigaro chakaomarara, munhu anogona kukanda dhizaini kuti ienderane nemuviri (wakakura muchiuno, wakamanikana pamabvi) iyo inogona kubata mutumbi wevashandisi panzvimbo. Zvakare iyo aruminiyamu pakati pemabvi nerestrest inogona kutapudzwa (yakafara pamabvi, yakatetepa kumakumbo) yakabata tsoka munzvimbo. Nechigaro chakapetwa, haugone kuchikachira kana kuti chaisazovhara zvachose.
Mushure mekugadziriswa kweMusika: Rigid Mawiricheya kazhinji ndine kumwe kugadziridzwa uye kugadzirisa ndokupeta machair. Yakawanda kupeta Mawiricheya vane miganho mukugadzirisa kwavo uye kugadzirisa. Semuenzaniso, akawanda akapeta Mawiricheya usabvumire kugadzirisa kona pakati peshure nechigaro.
Kuzvimiririra: Vashandisi vanogona nyore kuita shanduko kubva kuomarara Mawiricheya mune dzimwe mota zvakazvimirira. Na kupeta wiricheya, mushandisi kazhinji anoda shamwari yekupeta iyo wiricheya ndokuisa mubhutu remota. Nemamwe maitiro akaomarara Mawiricheya, mushandisi anogona chinja kupinda mumota uye kubva mukati memota, bvisa mavhiri maviri, peta pasi zororo rekumashure uye uuye ne wiricheya mukati memota woiisa kunga kuback seat kana pafloor. Kuzvimiririra kuchinjisa kwaizonyanya kunetsa mu kupeta wiricheya.
Esthetics: Dzimwe dzakaomarara Mawiricheya zvakagadzirwa kuti zvive zvinokwezva. Kupeta Mawiricheya hazviwanzo kutorwa seinokwezva, zvinongoshanda chete
Chii chakanakira a kupeta wiricheya? Kunyanya pane mukana mumwe chete: chigaro chakapetwa chinogona kuchengetwa mutangi remotokari pasina kubvisa mavhiri. Rigid Mawiricheya hazvisi zvevanhu vese, asi vanhu vazhinji vari izvozvi kushandisa Kumbofungatira Mawiricheya zviri nani kubva mukuomarara wiricheya.
Ndiani mutengi akakodzera kune akaomarara wiricheya? Mumwe munhu anoti:
Ane simba repamusoro remuviri
Mudiki uye anoshanda (makore mashanu-5)
Anoona avo wiricheya sechikamu chemuviri wavo uye kwete chete fenicha
Ndiani mutengi akakodzera wechigaro chekupeta? Mumwe munhu anoti:
Haizombove yakazvimiririra kana isina simba repamusoro remuviri
Iine simba repamusoro remuviri kana kubatana
Mudiki kwazvo (0-4) kana mukuru (60-90)
YEUKA: Yakaomarara wiricheya inoitirwa kuitira vashandisi 'nyore. Kupeta Mawiricheya zvinoitirwa kushamwaridzana nevamwe. Ndeupi waungasarudza iwe?